Vaovao - Ahoana no fomba famahana ny olan'ny orinasa mpamokatra sakafo ny trano fitehirizam-bokatra mandeha ho azy?
Ahoana no fomba famahana ny olan'ny orinasa mpamokatra sakafo ny trano fanatobiana mandeha ho azy?
Nantong Jiazhiwei Food Co., Ltd. (antsoina hoe: Jiazhiwei), amin'ny maha mpanamboatra sirop (fitaovana dite ronono) dia manome akora ho an'ny orinasa dite ronono maro toa an'i Guming sy Xiangtian.Ny orinasa dia miasa 24 * 7, 365 andro isan-taona.Miaraka amin'ny vokatra siropia 200.000 taonina isan-taona, dia nitombo haingana izy io ary heverina fa hitohy amin'ny fitomboana haingana ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Olana fitahirizana trano fanatobiana nentim-paharazana Jiazhiwei:
Miakatra ny vidin'ny asa ary mihena ny isan'ny mpiasa
Ny fahombiazan'ny asa tanana dia ambany, ary misy ny taham-pahadisoana
Mbola lafo ny vidin-tany
Ny fitantanana trano fanatobiana orinasa sy ny fitantanana ny famokarana dia tsy mitambatra akaiky, izay mora mahatonga ny fitahirizana entana
Ny haavon'ny automatique sy ny fampahalalam-baovao dia mitarazoka, ary misy ny tsy fahampian'ny fitantanana manara-penitra ny entana.
Mametraha fototra mafy orina
- Vertical habaka 22,9 metatra
- 9 rihana sy 8 lalana
- 2 dia stacker lalinavanobe koa samySystems
- 6 dia stacker lalina roavanobe koa samySystems
- 15.160 toerana pallet
Taorian'ny fanadihadiana tsara, tao amin'ny fananganana ampahany amin'ny trano fanatobiana entana mandeha ho azy, Jiazhiwei dia nanapa-kevitra ny hifidy ROBOTECH hanangana trano fitehirizam-bokatra azo antoka, azo antoka ary azo antoka.
Mba hanatsarana ny tahan'ny fampiasana ny toerana fanatobiana entana, ROBOTECHAS/RS rafitra dia mampiasa tanteraka nytoerana mitsangana 22,9 metatra, ary manangana trano fanatobiana entana mandeha ho azy miaraka amin'ny9 rihana sy 8 lalanaho azy.Anisan-dry zareo,2 dia lalina tokana stackervanobe koa samySystems, ary6 dia lalina roa stackervanobe koa samySystems, izay mampitombo be ny tahiry.Total saika15.160 toerana palletazo apetraka, ary ny fahafaha-mitahiry dia avo telo heny noho ny talohan'ny fanavaozana, izay mahafeno ny fangatahan'i Jiazhiwei amin'ny fitahirizana avo lenta.
Amin'ny lafiny fampandehanana mahomby, ny rafitra AS/RS dia mahatratra ireto fandrosoana manaraka ireto:
1) Ny tsingerina iombonana dia51 pallets/orahaingana miditra sy mivoaka ny trano fanatobiana entana;
2)160m/min hafainganam-pandeha avohafainganam-pandeha mitsivalana;
3) Ny entana ambony indrindra dia1100kg / pallet.
Ny fitehirizam-bokatra sy fizarana manan-tsaina no fironana amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny famokarana sakafo.Ny rafitra AS/RS trano fanatobiana entana dia afaka mahatratra ny "voalohany, mivoaka voalohany" ary "fanisana mandeha ho azy" mba hisorohana ny fahanterana voajanahary sy ny fahasimban'ny entana ara-tsakafo, ary koa hampihenana ny fatiantoka vokatry ny entana simba na very.
Baby Shuttle, Carton Live, Drive amin'ny Racking, Asrs Storage, Shuttle amin'ny lalana efatra, Conveyor,